Tababare Ernesto Valverde oo ka hadlay guuldaradii Barcelona kasoo gaartay kooxda Sevilla – Gool FM
Tababare Ernesto Valverde oo ka hadlay guuldaradii Barcelona kasoo gaartay kooxda Sevilla
(Barcelona) 24 Jan 2019. Tababare Ernesto Valverde ayaa kasoo hor muuqday saxaafada kadib guuldaradii 2-0 ahayd ay kala soo laabteen garoonka kooxda Sevilla ee Ramon Sanchez, kulankii lugta hore siddeed dhamaadka Copa del Rey.
Kadib marka ay ciyaarta soo idlaatay ayuu u sheegay saxaafada tababare Ernesto Valverde dhowr arimood ee quseeya kooxdiisa Barcelona:
“Way iska cadahay in kulankan aanan sameynin fursado badan aan goolal ku dhalin karnay, waana sababta aanan u dhalinin goolal”.
‘Waa sax inaan isbadal sameynay, waxaan filayaa inay sidaas ku habooneyd, hadii aan guuleysan lahayn xaalada sidaan way ka duwanaan lahayd”.
“Waxaan la ciyaari doonaa Axada kulan muhiim ah kooxda Girona, xaalada aad ayay inoogu adkaan doontaa, sababtoo ah waxaan la ciyaareynaa koox nidaamsan, waxaana dooneynaa inaan sii wadi karno tartankan”.
Intaas kadib tababare Ernesto Valverde ayaa waxaa wax laga weydiiyay bal inuu ka qoomameenayo ka reebista kulankan Lionel Messi, kadib guuldaradii ay kala soo laabteen kooxda Sevilla wuxuuna ku jawaab celiyay.
“Kama qoomameenayo arintaas, waa waxaan ku qasbanaa inaan sameeyo”.
Ugu dambeyn Valverde ayaa waxaa wax laga weydiiyay saxiixa cusub ee kooxda Barcelon ee Frenkie de Jong wuxuuna yiri:
“Waa saxiix cajiib ah ee saameyn ku yeelan kara kooxda xiligan la joogo iyo mustaqbalka, waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, wuxuu leeyahay mustaqbal ifaaya, waxaan u rajeyneynaa inuu ku fiicnaado kooxda, waxay inoo tahay guul weyn”.
Paris St-Germain oo ka Walwalsan XAALADA Neymar kaddib markii…iyo Taagerayaasha United oo Ku faraxsan Aqbaartan Cusub
Sarri oo u fududeenaya Real Madrid raacdada ay ugu jirto Eden Hazard, kadib markii uu arintan sameeyay